पोखराको पिउने पानीको शुद्धीकरण शुरु | eAdarsha.com
पोखराको पिउने पानीको शुद्धीकरण शुरु
१. पोखरेलीहरुले पिउने पानीको मुख्य स्रोत मर्दी खोला किनारमा व्यवस्थित शवदाह गृह, शौचालय र पानीको धारा निर्माण गरेर पानी शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा सिदिङ, सेतीघट्ट र खोराको मुखमा तीनवटा शवदाह गृह निर्माण गरिएको छ। अन्य पाँच ठाउँमा पाँच ओटा शवदाहगृह निर्माण गरिने कार्यक्रम छ।
२. शवदाह गृहमा जलाइएको लाशको खरानी सेÇटी ट्याङ्की बनाएर छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। खोला किनारामा दिसा पिसाव गर्दा पानी प्रदूषित हुने भएकोले शौचालय बनाइएको जनाइएको छ भने खोला किनारमा लुगा धुने गर्दा पनि पानी प्रदूषित हुने भएकोले त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
३. लागतको हिसाबले यो सानो परियोजना हो। तर यसको ठूलो महत्व छ। पोखरेलीहरुका लागि यी शवदाहगृहले झन् विशेष महत्व राख्दछन्। एक त पोखरामा पिउने पानीको अभाव छ भने अकोर्तिर पानी प्रदूषित छ। पोखरा बजारका कतिपय ठाउँमा पानीको अभाव खट्किन्छ। पानी आएको ठाउँमा पनि शुद्ध पानी पाइँदैन भन्ने गुनासो वषौर्ं देखि सुनिदै आइएको हो। वषा याममा झन् धाराबाट हिलो नै आउने गर्दछ।
४. खानेपानी संस्थानले सामान्य औषधी राखेर शुद्धीकरण गरेको जनाउँदै आएको छ। उपभोक्ताहरुले जति कराए पनि केही नहुने भएपछि मिनरल वाटर प्रयोग गर्ने गरेकाछन्। खानेपानीको अभाव हटाउन ट्याङ्करको पानी किनेर खाँचो पूर्र्ति गर्ने गरेका छन्। पानीको यस्तो अभाव भएको बेला शुद्ध पानीको कुरा एउटा कथा जस्तै भएको छ।
५. यस्तो अवस्थामा पोखरालेखनाथ महानगरपालिका, खानेपानी संस्थान र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको त्यो प्रयास प्रशंसनीय छ। तिनीहरू मिलेर निर्माण गरेका शवदाहगृह एक समारोहबीच स्थानीय जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय जनताले आÇनो स्वामित्वमा आएको कुरालाई तन्दुरुस्त राख्ने र खोलाको पानीलाई दूषित हुन नदिने प्रयास गर्नुपर्दछ।
६. दोस्रो चरणमा ल्वाङ, रिभान, धिताल, लाहाचोक र सेतीदोभान क्षेत्रमा शवदाहगृह बनाउने कार्यक्रम छ। निर्माणकर्ताहरुले अब विश्राम नलिइकन ती पाँच ठाउँमा शवदाहगृह निर्माण गर्नु पर्दछ। दोस्रो चरणमा परेका क्षेत्रमा जनसङ्ख्या केही घना छ। खोला त्यस क्षेत्र भएर बग्दा धेरै दूषित हुने गरेको सर्वविदितै छ।
७. पोखरेलीहरुले पिउने पानी स्थानीय स्तरबाट शुद्धीकरण गर्ने यो प्रयास भएको छ भने जापानी सरकारको तर्फबाट पिउने पानी शुद्धीकरणको ठूलो प्रयास पनि हुँदैछ। त्यो प्रयास भएपछि पोखराको पानी शुद्ध र पिउनयोग्य हुनेछ। पोखरेलीहरु त्यसको प्रतीक्षामा छन्। त्यो प्लाण्ट छिटो शुरु होस्, यही पोखरेलीहरुको माग छ।
प्रयास धेरै प्रतिफल थोरै
१. सरकार आफूले निर्धारण गरेको समृद्धि र सुखीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वातावरण अनुकूल छ। सरकार दुर्इ तिहाई बहुमतको छ। दुर्इ तिहाइ बहुमतको सरकार हुनु सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुनु हो। सरकारले कुनै पनि ऐन नियम लागु गर्न सक्छ र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन…